गोली स्टोभ: तिनीहरूलाई कसरी छनौट गर्ने, उत्तम मोडेलहरू, प्रस्तावहरू र थप!
को चुलो तिनीहरू अधिक र अधिक लोकप्रिय हुँदै गइरहेका छन्, विशेष गरी बजारमा तिनीहरूको आर्थिक मूल्यको कारणले गर्दा, कसरी सस्तो छर्राहरू किन्न सकिन्छ र आंशिक रूपमा सफल डिजाइनहरूको कारणले गर्दा जुन केही अवस्थामा फरक र सुरुचिपूर्ण स्पर्श दिन सक्छ। हाम्रा घरहरू। यदि तपाइँ गहिराइमा जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने के हो गोली स्टोभहरू, त्यहाँ के प्रकारहरू छन् र तिनीहरूले कसरी काम गर्छन् मा पढ्नुहोस्
सायद तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ कि स्टोभहरू विगतका यन्त्रहरू हुन्, तर यसबाट टाढा छन्, र आज तिनीहरू छन् गोली स्टोभ तिनीहरू सबैभन्दा लोकप्रिय छन्, अन्य प्रकारका स्टोभ र तताउने भन्दा धेरै सस्तो पनि।
गोली स्टोभ को तुलना
सबैभन्दा पहिले, हामी धेरै सस्तो गोली चुल्होहरू समीक्षा गरेर सुरु गर्न जाँदैछौं जुन तपाईंको घरलाई तताउने आदर्श माध्यम मात्र होइन, तर तपाईंको घर सजाउनको लागि एक आदर्श पूरक पनि हुन सक्छ।
- पावर:9किलोवाट
-आयामहरू: 91,2 × 43,4 × 50,6 सेमी
-अतिरिक्त: रिमोट कन्ट्रोल र आधार सुरक्षा
950,00 €सम्झौता हेर्नुहोस्
नोट: 8. / /
- पावर: 15 किलोवाट
-आयामहरू: 70x60x50 सेमी
-अतिरिक्त: अति तातो सुरक्षा
1.795,00 €सम्झौता हेर्नुहोस्
नोट: 10. / /
-आयामहरू: 50x47x81 सेमी
1.913,98 €सम्झौता हेर्नुहोस्
नोट: 9. / /
- पावर: 14 किलोवाट
-आयामहरू: 57x57x115 सेमी
-अतिरिक्त: डबल ढोका, प्रोग्रामयोग्य, रिमोट कन्ट्रोलको साथ
1.090,00 €सम्झौता हेर्नुहोस्
- पावर: 6,58 किलोवाट
-आयामहरू: ४६.३ x ७६.१ x ५५ सेमी
-अतिरिक्त: डिजिटल प्यानल, रिमोट कन्ट्रोल
1.184,27 €सम्झौता हेर्नुहोस्
सस्तो गोली स्टोभ
हाल बजारमा हामीले पेलेट स्टोभको ठूलो मात्रा भेट्टाउन सक्छौं, तीमध्ये केही धेरै सस्तो छन् र हामी तपाईलाई अर्को देखाउँछौं, फाइदाको साथ तपाईले तिनीहरूलाई Amazon मार्फत पनि यसको मतलब के हो भनेर किन्न सक्नुहुन्छ।
स्टोभिया स्टोभ9किलोवाट
सस्तो मूल्यमा एक गोली चुलो प्राप्त गर्न गाह्रो छ, तर निस्सन्देह यो मोडेलले यो आवश्यकता पूरा गर्दछ, साथै हामीलाई केही धेरै रोचक विशिष्टताहरू प्रदान गर्दछ। र यो यो हो कि यो एक शानदार ऊर्जा दक्षता छ।
Isola 9kw STOVIA - स्टोभ...
यसमा एक मौलिक र आधुनिक शैली पनि छ, धातु तरंग-आकारको क्ल्याडिङको लागि धन्यवाद जसले हामीलाई हाम्रो कोठामा एक विशेषता स्पर्श प्रदान गर्दै, ध्यान आकर्षित नगरी यसलाई जहाँसुकै राख्न अनुमति दिन्छ।
अन्य स्टोभहरू भन्दा धेरै कम सावधानीपूर्वक डिजाइनको साथ, यो मोडेलले हामीलाई बदलामा अन्य चीजहरू प्रदान गर्दछ, जसमध्ये हामीले निस्सन्देह ठूलो क्षेत्रहरूको लागि यसको ताप क्षमतालाई हाइलाइट गर्नुपर्छ। यसको मूल्यले के प्रस्ताव गर्छ भन्ने आर्थिक मूल्य हो, जसलाई हामी केही महिनामा परिशोधन गर्न सक्षम हुनेछौं र जसमा हामीले दिनहुँ उपभोग गर्ने पेलेटहरू थप्नु पर्छ।
Eider बायोमास ESC670 8...
यदि हामी स्टोभ खोज्दै हुनुहुन्छ जसले हामीलाई तापमान र अन्य धेरै चीजहरू सधैँ नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ, एक राम्रो विकल्प यो मोडेल र उपकरणको शीर्षमा अवस्थित यसको नियन्त्रण केन्द्र हुन सक्छ। यसको मूल्य अलिकति उच्च लाग्न सक्छ, तर छोटो समयमा यो धेरै किफायती देखिन्छ किनभने परिशोधन र सेवा उत्कृष्ट छन्।
FLS गोली चुलो...
एक हजार यूरो को अनुमानित मूल्य र 9KW को एक शक्ति संग।
हामीले बजारमा फेला पार्न सक्ने सस्तो स्टोभहरू मध्ये एक यो स्टाइल फ्यूगो हो, जसको मूल्य हाल करिब १००० यूरो छ। बदलामा, यसले हामीलाई ७० वर्ग मिटरदेखि ११५ वर्ग मिटरसम्म ठूला कोठाहरू तताउनको लागि उत्कृष्ट शक्ति र उल्लेखनीय ऊर्जा दक्षता भन्दा बढी प्रदान गर्दछ, यसले सम्पूर्ण भुइँ तताउनको लागि उपयुक्त बनाउँछ।
गोली चुलो १४ किलोवाट...
अतिरिक्त अतिरिक्तको रूपमा, नोट गर्नुहोस् कि यसको डिजिटल स्क्रिनको लागि धन्यवाद हामी यसलाई समयमा वा हामीले चाहेको तापक्रममा काम गर्न प्रोग्राम गर्न सक्छौं।
Ferroli LIRA 6,58kW स्टोभ
निस्सन्देह, हामी बजारमा सबैभन्दा राम्रो गोली चुल्होहरू मध्ये एकको सामना गरिरहेका छौं, जसमा सावधानीपूर्वक डिजाइन छ, जसले हामीलाई कुनै पनि समयमा झगडा नगरी यसलाई हाम्रो घर वा व्यवसायमा जहाँसुकै राख्न अनुमति दिन्छ। थप रूपमा, यसको बलहरू मध्ये एक धेरै उच्च प्रदर्शन हो जुन यसले हामीलाई प्रदान गर्दछ र त्यो संख्यात्मक रूपमा 92,2% सम्म बढ्छ।
Ferroli lira - स्टोभ ...
सबैभन्दा नकारात्मक पक्षहरू मध्ये हामी यसको मूल्य फेला पार्छौं, यद्यपि सबै कुरा राम्रो समाचार हुन सक्दैन। निस्सन्देह, यदि तपाइँ हाम्रो राय चाहनुहुन्छ भने, यो लगानी तपाइँको सम्पूर्ण जीवन मा देखेको सबै भन्दा राम्रो मध्ये एक हुन सक्छ।
के एक गोली र बायोमास स्टोभ एउटै हो?
यो एक प्रश्न हो जुन धेरै मानिसहरूले आफैलाई सोध्छन् जब एक प्रकारको स्टोभ छनौट गर्छन्। बायोमास स्टोभहरू वन अवशेषहरूबाट व्युत्पन्न इन्धन प्रयोग गर्ने हो जस्तै हाँगाहरू, छाँट्ने मलबे, घाँस र पुराना लगहरू।
Pellets प्राकृतिक उत्पादन को एक प्रकार को रूप मा वर्गीकृत छ ठोस बायोमास। यो सुख्खा प्राकृतिक भुरा, additives बिना बनेको छ। यसमा बाइन्डर भुसामा रहेको लिग्निनलाई धन्यवाद र उच्च दबाबको प्रयोगले गोली बनाइन्छ। यो एक बेलनाकार आकार छ र तिनीहरू आकार मा धेरै सानो छन्।
त्यसैले यसो भन्न सकिन्छ गोली चुलो एक प्रकारको बायोमास चुलो हो, किनभने तिनीहरू प्राकृतिक तत्व हुन् जुन गर्मी उत्पन्न गर्न इन्धनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
यस जानकारीको साथ तपाईले गोली स्टोभको बारेमा थप केहि जान्न र कुन छनौट गर्ने भनेर जान्न सक्षम हुनुहुनेछ।
गोली के हो?
पेलेटहरू एक प्राकृतिक उत्पादन हो, ठोस बायोमासको रूपमा सूचीकृत र धेरै सानो सिलिन्डरहरू मिलेर बनेको छ, व्यासमा केही मिलिमिटर मात्र।
तिनीहरू सुख्खा प्राकृतिक भुसाबाट बनेका हुन्छन्, कुनै पनि additives थप्न बिना, किनभने यसको आफ्नै लिग्निन एक बाइन्डरको रूपमा पूर्ण रूपमा काम गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसले भुसालाई धेरै उच्च दबाबमा कम्प्रेस गर्न काम गर्दछ र यसरी गोली बनाउँछ, जसले छर्राहरूलाई सानो आकारको बावजुद बाक्लो र कडा संरचना बनाउँछ।
यसको अर्को उत्कृष्ट विशेषता हो ठूलो क्यालोरी मूल्य जुन लगभग यसको मूल्य संग €0,05 प्रति kWh तिनीहरूलाई हाम्रो घरलाई राम्रो तापक्रममा राख्नको लागि एउटा आदर्श र सस्तो तरिका बनाउनुहोस्।
जब यो छर्राहरू किन्नको लागि आउँछ, हामी यसलाई धेरै ठाउँहरूमा गर्न सक्छौं, विशेष गरी ती ठूला क्षेत्रहरू निर्माण वा सजावटका लागि समर्पित, तर केही ठूला सुपरमार्केटहरूमा पनि।
सबैभन्दा सामान्य रूपहरू जसमा तिनीहरू सामान्यतया वितरित हुन्छन् निम्न हुन्:
बोरा। 15 किलोग्राम तौल, हामी धेरै ठाउँमा धेरै सस्तो मूल्यमा गोलीका झोलाहरू किन्न सक्छौं। तिनीहरू थोरै खपत भएका प्रयोगकर्ताहरूका लागि उपयुक्त छन् र जो कोहीको लागि पनि धेरै व्यवस्थित छन्। मूल्यको रूपमा, लगभग 15 किलोग्रामको झोलाको मूल्य 3.70 यूरो छ।
बिगब्यागहरू। यदि तपाईं आफैंलाई ट्यांकर ट्रकहरू आपूर्ति गर्न सक्नुहुन्न भने, यो चाखलाग्दो विकल्प भन्दा बढि हो, र त्यो हो कि एक ठूलो झोलाले लगभग 1.000 किलोग्राम गोलीहरू समात्न सक्छ। यसबाहेक, यो विकल्प झोलाहरू द्वारा छर्राहरू किन्न भन्दा सँधै सस्तो छ।
ट्याङ्कर ट्रक। अन्तमा हामी ठूला उपभोक्ताहरू हौं भने पेलेटहरू किन्नको लागि सबैभन्दा सहज र किफायती तरिका फेला पार्छौं। यी ट्रकहरूको एकमात्र कमजोरी भनेको छर्राहरू सिधै ट्याङ्कीमा स्वचालित रूपमा जम्मा गर्ने हो कि हामीसँग छर्राहरू ढुवानी गर्ने नली र ट्याङ्की ट्रक दुवैको लागि पूर्ण पहुँचयोग्य जम्मा हुनुपर्छ।
गोली स्टोभ को प्रकार
अर्को हामी एक गर्न जाँदैछौं हामीले बजारमा भेट्टाउन सक्ने गोली स्टोभका प्रकारहरूको समीक्षा गर्नुहोस् र तिनीहरूसँग के ठूलो लोकप्रियता छ;
हावा स्टोभहरू हामीले बजारमा प्रायः फेला पार्ने स्टोभहरू हुन्। यस प्रकारका स्टोभहरू मुख्यतया यो स्थित भएको कोठामा हावा तताउन प्रयोग गरिन्छ, यसको कम शक्ति र सबै भन्दा माथि पहुँच भित्रको कारण सामान्यतया घर तताउन खोज्न सक्षम नभएको। ठूलो फाइदा यो हो कि तिनीहरूले कोठामा समान रूपमा गर्मी वितरण गर्छन्।
यी प्रकारका स्टोभहरू एयर स्टोभसँग धेरै समान छन्, यद्यपि ठूलो फाइदाको साथ तिनीहरूले विभिन्न कोठाहरू वा कोठाहरूमा विभिन्न ट्यूबहरू मार्फत हावा च्यानल गर्छन् जसले तातो आउटलेटहरूको कार्य गर्दछ। यस प्रकारको स्टोभको ठूलो फाइदा यो हो कि तिनीहरू सम्पूर्ण घर वा ठूला कोठाहरू तातो बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ जसमा धेरै तातो आउटलेटहरू हुनु आवश्यक छ।
को नरम गोली स्टोभ अन्य प्रकारका स्टोभहरू भन्दा ठूलो फाइदा छ एक वा दुई अतिरिक्त हावा भेन्टहरू छन्। कुनै पनि गोली चुलोको अगाडि तातो हावाको आउटलेट हुन्छ, जुन सामान्यतया पर्याप्त भन्दा बढी हुन्छ, तर यदि, उदाहरणका लागि, हामीले तताउन चाहेको कोठा धेरै ठूलो छ भने, हामी जहिले पनि डक्टेड स्टोभ प्रयोग गर्न सक्छौं। यो पनि सम्भव हुन सक्छ कि हामी एकै साथ एक भन्दा बढी कोठा तताउन चाहन्छौं ताकि हामी हावा वितरण ट्यूबहरू मार्फत तातो हावा वितरण गर्न सक्छौं।
निस्सन्देह, एक गोली स्टोभ जटिल हुनेछ जसले परम्परागत ताप प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ र स्टोभ मुख्य ताप उत्पादन खाता हुन जारी रहनेछ, त्यसैले तातो हावा इष्टतम अवस्थामा अन्य कोठाहरूमा पुग्न सक्दैन।
अन्तमा हामी थर्मो-स्टोभहरू फेला पार्छौं, जुन सबैभन्दा लोकप्रिय स्टोभहरू मध्ये एक हो तिनीहरू पानी रेडिएटरहरूको प्रणालीको माध्यमबाट सम्पूर्ण घरलाई तताउन प्रयोग गरिन्छ। एक आन्तरिक पानी सर्किट को लागी धन्यवाद, जुन स्टोभ तातो हुन्छ, हामी सबै कुरालाई सरल तरीकाले र अधिकतर अवस्थामा आर्थिक रूपमा तताउन सक्छौं। यी प्रकारका स्टोभहरूका धेरै फाइदाहरू मध्ये एउटा यो हो कि तिनीहरूले तातोको अलावा दैनिक उपभोगको लागि तातो पानी पनि उत्पादन गर्छन्।
धेरैले पेलेट हाइड्रो स्टोभ वा थर्मो स्टोभलाई मान्छन् स्टोभ र बॉयलर बीचको बिन्दु। पहिलो नजरमा, सबै कुराले हामीलाई एक गोली चुल्होसँग व्यवहार गर्दैछ भनेर सोच्न डोर्‍याउँछ, तर विकिरण र कन्भेन्सनद्वारा तातो उत्सर्जन गर्नुको अलावा, यसको भित्र एक एक्सचेन्जर छ जसले यसलाई पानी तताउन अनुमति दिन्छ जसको साथ हामी त्यो तातो पानीलाई वितरण गर्न सक्छौं। रेडिएटरहरू जुन तिनीहरू सबै चीजहरूमा वितरित हुन्छन्। यो तातो पानी अन्य प्रकारका उपकरणहरूमा वितरण गर्न पनि सम्भव छ जुन रेडिएटरहरू हुनुपर्दैन।
यी प्रकारका स्टोभहरू सबैभन्दा उपयोगी र रोचक छन्, यद्यपि तिनीहरूसँग समस्या छ कि तिनीहरू धेरै महँगो र ह्यान्डल गर्न जटिल छन् कुनै पनि अन्य स्टोभ भन्दा। र यो हो कि पानीको सर्किट भएकोले हामीलाई विस्तारित पोत, सुरक्षा भल्भ, स्टपकक्स र लगभग निश्चित रूपमा एक सर्कुलेशन पम्प चाहिन्छ, सम्पूर्ण चीजमा पानी वितरण नेटवर्कको अतिरिक्त, जुन निस्सन्देह यसले चीजहरूलाई धेरै जटिल बनाउँछ।
गोली स्टोभ कसरी काम गर्दछ
पेलेट स्टोभ, जस्तो देखिन सक्छ, तिनीहरूसँग धेरै सरल सञ्चालन छ। र यो हो कि स्टोभमा एउटा ट्याङ्की छ जहाँ छर्राहरू भण्डारण गरिन्छ, जुन स्क्रू मार्फत दहन कक्षमा स्थानान्तरण गरिन्छ जहाँ छर्राहरू उत्सर्जन गर्ने ऊर्जा र धुवाँ पनि जलाइन्छ, जुन बाहिरी आउटलेटमा च्यानल गरिन्छ जुन सामान्यतया प्राय: स्थित हुन्छ। स्टोभको पछाडि, र जसको बाहिरी भागमा आउटलेट हुनुपर्छ।
पेलेट स्टोभको बारेमा कुरा गर्दा, जुन धेरैले परम्परागत काठ स्टोभसँग सम्बद्ध छन्, हामीले यो मनमा राख्नु पर्छ। eयी स्टोभहरू हावामा भरिएका छन् वा के जस्तै छन् पङ्खाको माध्यमबाट तिनीहरू आफू भएको कोठाबाट हावा लिन्छन्, यसलाई तताउँछन् र पछि कोठामा फर्काउँछन्.
एक पटक यो डेटा थाहा भएपछि, हामीले तातो हावा र विकिरणलाई चलाउने फ्यानको संवहन मार्फत तातो स्थानान्तरणको दुई घटनाहरू बीच भिन्नता देखाउनुपर्छ जुन गोलीहरूको दहनसँग हुन्छ।
यस प्रकारको स्टोभको मात्र कमजोरी यो हो समय-समयमा तपाईंले तथाकथित एशट्रेबाट खरानी हटाउनु पर्छ, जुन ग्रिल मुनि स्थित छ। निस्सन्देह, त्यहाँ पहिले नै विभिन्न प्रकारका स्टोभहरू छन् जसले यी खरानीहरूलाई स्वचालित रूपमा कम्प्रेस गर्दछ, जसले हामीलाई यिनीहरूलाई धेरै फ्रिक्वेन्सी बिना नै र सरल तरिकामा हटाउन अनुमति दिन्छ।
के गोली चुलोलाई धुवाँ आउटलेट चाहिन्छ?
दुर्भाग्यवश गोली स्टोभ को ठूलो कमजोरी मध्ये एक यो हो सबै अवस्थामा तिनीहरूलाई धुवाँ खाली गर्न चिम्नी चाहिन्छ, जसले छर्राहरूको दहन उत्पादन गर्दछ, जुन धेरै सानो भए पनि, केही नालीबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ। थप रूपमा, यो फायरप्लेस सुरक्षा र परिचालन समस्याहरूको लागि सर्तहरूको श्रृंखला पछ्याएर राखिएको हुनुपर्छ।
पहिलो स्थानमा, नियमन (RITE) ले भवनको छाना माथि जहिले पनि सबै धुवाँ बाहिर जान आवश्यक छ, यसरी पार्श्व धुवाँ आउटलेट निर्माण गर्ने सम्भावनालाई हटाउँछ, जुन केहि केसहरूमा धेरै रोचक हुन सक्छ। यसले हामीलाई सोच्न प्रेरित गर्छ कि यदि हामी समुदायमा बस्छौं पेलेट स्टोभको प्लेसमेन्ट धेरै जटिल छ किनकि चिम्नी छतमा राख्नु पर्छ जसको साथ यो प्रकारको स्टोभहरू रोज्न व्यावहारिक रूपमा असम्भव छ।
यदि हामीसँग चिम्नी राख्ने नि:शुल्क तरिका छ भने, यो INOX स्टिलले बनेको हुनुपर्छ र प्राथमिकतामा इन्सुलेटेड र डबल पर्खालले बनाइन्छ, जसले कन्डेन्सेसनलाई रोक्न सक्छ।
गोली स्टोभ को मर्मत
गोली स्टोभ को एक महान लाभ यो हो तिनीहरूसँग धेरै कम रखरखाव छवा, धेरै अवशेषहरू नछोडिकन, गोली दहन धेरै सफा छ भन्ने तथ्यको लागि धन्यवाद।
धेरै कुकस्टोभ निर्माताहरु को अनुसार, बस यसलाई वर्षमा एक पटक सफा गर्नुहोस्, जबसम्म हामी इन्धनको रूपमा पेलेटहरू मात्र प्रयोग गर्दैनौं। उदाहरणका लागि, धेरै प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो स्टोभमा अन्य प्रकारका सामग्रीहरू राख्छन्, जसले थप अवशेषहरू छोड्छ र जसले हामीलाई बारम्बार स्टोभ सफा गर्न आवश्यक हुन सक्छ। थप रूपमा, यी धेरै स्टोभहरूमा काउन्टरहरू पनि छन्, जसले प्रयोगको घण्टा चिन्ह लगाउँदछ, र यसले हामीले कहिले गहिरो सफाई गर्नु पर्छ भनेर संकेत गर्दछ। धेरै जसो अवस्थामा, वर्षमा एक पटक हाम्रो गोली चुलो सफा गर्न पर्याप्त हुनेछ।
के गर्नु पर्यो भने केही आवृत्ति संग हटाउनुहोस् गोली खरानी हो, जसले धेरै राम्रोसँग जलेको भए पनि, केहि अवशेषहरू छोड्छ। तपाईलाई एउटा विचार दिनको लागि, 15 किलोग्राम गोलीहरूले केही ग्राम खरानी मात्र उत्पन्न गर्दछ।
थप रूपमा, तपाईंले स्टोभहरू बनाउने रबरहरूमा विशेष चासो तिर्नु पर्छ, किनकि तिनीहरू समयको साथमा लुक्छन्, यद्यपि यसका लागि सायद यो उत्तम हुन्छ कि तपाईंले प्राविधिक सेवाको सहारा लिनु अघि, तपाईंले आफैलाई साहसिक कार्यमा लन्च गर्नु अघि, खतरनाक। , यस प्रकारका टुक्राहरू परिवर्तन गर्नुहोस्। बाँकीको लागि, गोली स्टोभहरूमा कुनै पहिरन भागहरू छैनन्, जुन सधैं सराहना गरिन्छ।
गोली चुल्हो सुरक्षित छ?
पेलेट स्टोभ किन्न इच्छुक हामी सबैले आफैलाई सोध्ने एउटा प्रश्न हो कि तिनीहरू हाम्रो घर वा अन्य ठाउँमा स्थापना गर्न पूर्ण रूपमा सुरक्षित छन्। र त्यो हो यो स्टोभका प्रकारहरूले ताप उत्पन्न गर्न दहन प्रयोग गर्दछ, त्यसैले त्यहाँ कुनै पनि समयमा खतराहरू देखा पर्न सक्ने कुनै शंका छैन।
यद्यपि, गोली स्टोभ, न्यूनतम हेरचाह र केही अन्य सावधानीहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित छन्यस तथ्यको लागि धन्यवाद कि दहन छर्राहरूबाट हुन्छ, अन्य स्टोभहरूमा प्रयोग गरिने अन्य भन्दा धेरै सुरक्षित सामग्री।
गोली चुल्होका सकारात्मक पक्षहरू मध्ये, हामीले ग्यास वा डिजेल जस्ता अन्य सामग्रीहरूको तुलनामा पेलेटहरू धेरै कम ज्वलनशील हुन्छन् र तिनीहरू पनि विस्फोट हुँदैनन् भन्ने कुरा फेला पार्छौं। सबै कुराको साथमा पनि हामीले केही सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ ताकि यस प्रकारका स्टोभहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित छन्।
स्टोभको अत्यधिक तताउनबाट बच्नुहोस्, जुन कारण हुन सक्छ, उदाहरणका लागि, फ्यान विफलताको लागि, जुन हामीले सधैं नजिकबाट निगरानी गर्नुपर्छ। यो पनि हुन सक्छ कि स्टोभले स्थापित भन्दा बढी छर्राहरू जलाउँछ, गल्ती वा असफलता, र फ्यानले आपूर्ति गर्दैन। कतिपय अवस्थामा स्टोभ आफैं बन्द हुन्छ, तर अरूमा यसले सामान्य रूपमा काम गर्न जारी राख्छ, जसमा हामीले ठूलो समस्याबाट बच्न ध्यान दिनुपर्छ।
सामान्यतया र तिनीहरूसँग केही जोखिम छ भन्ने तथ्यको बावजुद, सबै स्टोभहरू जस्तै, तिनीहरू धेरै सुरक्षित छन् र हामीले यसलाई हाम्रो दिनको दिनमा प्रयोग गर्न कुनै समस्या हुनुपर्दैन, यद्यपि हामी यसलाई राम्रो अवस्थामा राख्ने प्रयास गर्छौं र स्थापित समयमा उपयुक्त जाँचहरू र सफाईहरू पूरा गर्छौं।
गोली स्टोभ कसरी स्थापना गर्ने
गोली स्टोभ स्थापना गर्न तपाईंले चार मुख्य तत्वहरूलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ:
स्थापना साइट राम्रोसँग छान्नुहोस्। अधिकतम कार्यसम्पादन प्राप्त गर्न स्टोभको शक्तिको लागि कोठा उपयुक्त रूपमा आकार हुनुपर्छ।
बाहिरी हावा लिनुहोस्। धुवाँ र सम्भावित विषाक्तताबाट बच्न राम्रो भेन्टिलेसन हुनु महत्त्वपूर्ण छ।
फ्लु ग्याँस कनेक्टर फिट गर्नुहोस्। यो पाइपको खण्ड हो जसले फ्लुलाई चुलोसँग जोड्छ। यसरी धेरै जसो धुवाँ विदेश पठाइनेछ ।
टोपीको उचित स्थान र प्रकार। टोपी त्यो भाग हो जुन फ्लुमा परिणत हुन्छ। यसलाई ठीकसँग काम गर्नको लागि, यसले केही आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्छ जस्तै यसको आकार (यो ट्यूबको आउटलेट खण्डको दुई गुणा हुनुपर्छ)।
गोली स्टोभ ब्रान्डहरू
जब तपाइँ एक गोली स्टोभ छनोट गर्नुहुन्छ, तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि कुन ब्रान्डले तपाइँलाई उत्कृष्ट प्रदर्शन र उत्तम मूल्यमा प्रस्ताव गर्दछ। यहाँ हामी चारवटा ब्रान्डहरू सूचीबद्ध गर्दछौं जसको गुणस्तर र मूल्य हातमा जान्छ।
ब्रोनपी स्पेनमा निर्मित बायोमास स्टोभको राष्ट्रिय ब्रान्ड हो। तिनीहरूको मूल्य एकदम सस्तो छ। तिनीहरूले बेच्ने स्टोभको शक्तिहरू वरपर छन्6देखि 15 किलोवाट मात्र 1.300 यूरो भन्दा बढी मूल्यहरु संग।
तिनीहरूसँग सामान्यतया कुनै घटना हुँदैन र पैसाको लागि मूल्यको सन्दर्भमा सबै भन्दा राम्रो हुन्छ।
Lacunza ब्रान्ड स्टोभ पनि स्पेन मा निर्मित छन्। पेलेट स्टोभहरू सस्तो छन्, यद्यपि ब्रान्ड कास्ट आयरन काठ स्टोभहरूमा अधिक विशिष्ट छ।
यो ब्रान्ड राम्रोसँग परिचित छ र ठूलो प्रतिष्ठा छ। यसको निर्माण Galicia मा गरिन्छ र यो एक हो पहिलो ब्रान्डहरू जसले करिब ३० वर्षअघि बायोमास चुलोको जिम्मा लिएका थिए । तिनीहरू आफ्नो नयाँ प्रगतिको लागि विश्वव्यापी रूपमा परिचित छन्, त्यसैले तिनीहरू यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी माग भएका छन्।
यी स्टोभका निर्माताहरू इटालियन हुन्। तिनीहरू पनि ठूलो प्रतिष्ठा र विश्वव्यापी रूपमा परिचित ब्रान्ड हुन्। कास्ट आइरन पिलेट स्टोभहरू छन् राम्रो पहिचान र उत्कृष्ट गुणस्तर। तिनीहरू डिजाइन र विवरणहरूमा धेरै सावधान छन्। थप रूपमा, तिनीहरूका उत्पादनहरू टिकाऊ र बलियो हुनको लागि प्रतिष्ठा छ।
तिनीहरू मूल्यमा अलि बढी हुन सक्छन्, तर कुनै शंका बिना, तिनीहरूका सबै स्टोभहरू माथिल्लो-मध्यम दायराका छन्।
1 गोली स्टोभ को तुलना
2 सस्तो गोली स्टोभ
2.1 स्टोभिया स्टोभ9किलोवाट
2.2 इडर बायोमास
2.4 शैली सेतो
2.5 Ferroli LIRA 6,58kW स्टोभ
3 के एक गोली र बायोमास स्टोभ एउटै हो?
4 गोली के हो?
5 गोलीहरू किन्नुहोस्
6 गोली स्टोभ को प्रकार
6.1 एयर हीटरहरू
6.2 डक्ट स्टोभ
6.3 थर्मो स्टोभहरू
7 गोली स्टोभ कसरी काम गर्दछ
8 के गोली चुलोलाई धुवाँ आउटलेट चाहिन्छ?
9 गोली स्टोभ को मर्मत
10 गोली चुल्हो सुरक्षित छ?
11 गोली स्टोभ कसरी स्थापना गर्ने
12 गोली स्टोभ ब्रान्डहरू
12.3 पारिस्थितिक वन
स्टोभ » गोली र बायोमास स्टोभ